China Panther 500x500mm Manufacturer sy Supplier | AeroV
● Modular Design Nanao Quick Fikarakarana
● IP65 for Harsher mando & Sandy Conditions
● mifanaraka tsara amin'ny EMC-B Class Certificate
● High Ampitahao Taham & Avo azo itokisana
● Front na Rear Serviceability
● Super Easy Fametrahana
● 2 taona Warranty
Alefaso Email ho US Litera
Panther dia natao manokana ho an'ireo ivelan'ny trano avo lenta LED famantarana ilaina ny miasa eo ambany ranomasina harsher fepetra mba hanohitra ny mavesatra hamandoana sy ny sira. IP65 ho an'ny aloha sy aoriana lafiny intsony ny hevitra, fa efa voaporofo fa marina sy mafy orina. Amin'izao fotoana izao, ivelan'ny trano raikitra nitondra lamba niova ary fametrahana faran'izay mora amin'ny fikojakojana ambany vola dia fahaiza-teknolojia mandrakariva isika ka mifantoka amin'ny nanolo-tena handray anjara ny Modular nitondra miseho vahaolana.
Pixel dity 3.9mm 5.21mm 10.41mm
Cabinet Fanapahan-kevitra 128 × 128 96 × 96 48 × 48
famirapiratana ≥5500 nits
Gray Scale 65536 ambaratonga isan-loko
NW 4.8kg / governemanta, 26kg / sqr.meter amin'ny Al. filanjana
Dreninao Power (max./avg.) 600/240 Watts isan-sqr.meter
Maintenance anoloan'ny & aoriana fanompoana
IP Rating IP65 fepetra henjana-dranomasina
Ivelany Aluminm Simple Frame
Io tsotra Al. toetsika dia azo atao amin'ny tenanao sy afaka manome 2D sary ho an'ny boky. Koa, dia afaka mividy avy amintsika mivantana. Raha ny mahazatra, misy 1mx1m (4.5kg / PC) sy ny 0.5mx0.5m (1.5kg / PC) ny safidy. Izany dia miankina amin'ny tetikasa ny antsipirihany sy ny fametrahana fitakiana. Dia aleon'ny sasany mpanjifa ny iray lehibe kokoa mba hanamorana ny fametrahana mora kokoa sy haingana, ka dia ho iray 1mx1m tsy safidy ratsy.
Panther ny fampiharana tena malefaka sy isan-karazany eo amin'ireo toerana izay misy ny toerana fametrahana kely sisa, na tsy misy indray varavarana ho an'ny fikojakojana sy ny Loading / fanohanana fahaizany dia voafetra ihany. Ary indrindra Panther dia hanampy famahana ny olana nateraky ny asa lafo vola, fikojakojana sy ny fametrahana vola lany. Kosa, toe vy tsotra dia hanana ny tontonana niakatra tao amin'ny rindrina simenitra mivantana tsy misy ny nentim-paharazana sy ny mikitoantoana fonosina filanjana azy.
● Wall-nitombo Advertising Sign
● 90 ° mitambatra Building Sign
● Traffic Sign na amoron-dalana LED takelaka
Led Display Billboard, Waterproof Led Screen, Indoor Led Video Wall, Seamless Led Video Wall, Kanjo Nahita Asehoy Screen Video Wall takelaka , Led Outdoor Advertising Board,